Aadde Azeb Masfin: 'Gara caalu soorama Mallasif kennamun of jiraachisaa ture' - BBC News Afaan Oromoo
Aadde Azeb Masfin qabsooftuu gammeettii ABUT fi haadha warraa MM duraanii Mallas Zeenaawwiiti. Giifti Duree yeroo turanitti dura teessuu dhaabbata Waldaa Tigiraay Deebisanii Misoomsuu (EFFORT) turan.
Erga abbaan warraa isaanii Obbo Mallas boqotanii immoo hundeessituu fi walitti qabduu boordii Faawundeeshinii Mallas tahuun hojjechaa jiru.
Giifti Duree yeroo turanitti namoota dhibee sammuu qaban gargaaruuf hojii hojjechaa turaniin akka hedduu boonan dubbatu.
Qabsooftuun Tigraay akaa'ii gurguruun jiraattu
Dhaabbilee kaan waliin tahuun hojii baay'ee akka hojjechaa turan himanii isaan keessaa Federeeshinii Dubartoota Itiyoophiyaan kan hundaa'e ''Gidduugala Gullit' '[Dhaabbata dubartoota daandii irratti daldalan deeggaru] yaadicha maddisiisuutii hanga xumuraatti shoora ol-aanaa akka bahaa turan yaadatu.
Hojiin isaanii inni guddaan ammoo kan paartiin isaanii itti kenne akka tahes himan. ''Hojiin itti of ceepha'u osoo hin hojjetiin, hojii gaarii qofa hojjedhee bahuukootti nan boona, namni waan barbaade yoo jedhes,'' jedhan.
Hiyyummaa irratti hojiiwwan hojjedhe hundinuu gaariidha jedheen amana jedhan.
Abbaan warraa isaanii MM duraanii erga du'aan boqotanii Hagayyi darbe waggaa 7ffaa isaaniiti.
Qabsooftuu dirree waraanaa irratti abbaa waliin wal waraante
Haa tahu malee Aadde Azeb Masfin waggoota darban keessa maal hojjechaa turan? Amma hoo maal hojjechaa jiru?Ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuun gaaffiif deebii waliin taasisneerra.
Eessa jiraatu: Namootni baay'een biyya keessa hin jirtu anaan jedhu. Al takka takka bahee kanan deebi'uun ala Finfinneen jiraachaa jira.
Erga abbaan warraa keessan Obbo Mallas du'anii masaraa mootummaa dhaqxanii beektuu?
Yeroo baay'ee deemee hin beeku. Miseensa Koree hojii raawwachiftuu yeroon turetti guyyaa tokkoof lama waajjira Ministira Muummee deemee beeka. Walgahiinis achumatti waan gaggeeffamuuf.
Kanaan ala garuu hin deemne. Deemuus hin barbaadu.
Bara bulchiinsa Abiy Ahimed jechuudhaa?
Eyyee! Dhiyoo kana walgahiif waanan deeme natti fakkaata. Garuu yeroo baay'ee hin deemne.
Masaraa mootummaa keessa waggoota dheeraaf ijoollee keessan waliin waan jiraachaa turtaniif hin yaadnee?
[Callisa]... Gaafan achiin darbu illee homaa natti hin fakkaatu. Sababni isaas achiibaafamuu koo irrattii.....Mallasiin awwaaleen bahe waan taheef. Isa irratti ammoo masaraa mootummaa keessa hojiin nuuf kennameeti kan akka qabsaa'otaatti jiraanne.
Masaraa mootummaa keessaa Mallasiin awwaalleen baha jedhee yaadee hin beeku. Lamaan keenya waliin baanee akkuma lammii Itiyoophiyaa tokkotti bilisa taanee sochoonee guyyaa itti waliin jiraannu yaadaan ture.
Anillee nan deddeema ture. Mallas garuu yeroo itti sosocho'u hin arganne ture. Achumatti akka hidhamee taa'etti achumatti awwalee bahuun koo na gaddisiisa.
Masaraa Mootummaa caalaa Bataskaana Sillaasee gafan seenu natti dhagahama. Masaraa mootummaa gaafan ilaalu sa'aatii Mallasiin awwaalee deebi'e sana qofan yaadadha.
Maaliif akka tahe beekuu baadhus inni kaan sammuukoottiyyuu hin dhufu.
Goodayyaa suuraa Aadde reeffi MM duraanii Mallas Zenaawwii yeroo buufata xiyyaaraa Boolee gahetti
Iyyi ... reeffi isaa yeroo bahuu fi fudhee galu....naasuun isaa! Dhuma irrattis achi keessa yeroo baanu rakkoo guddaatu ture. Kana kanatu akkan hin yaadanne na godhe natti fakkaata.
Erga abbaan warraa keessan du'anii waggaa torba guuteera. Ergasii maal hojjechaa turtan?
Hojii paartii irra miti kanan jiru. Ofiikoofi ijoolleekoo waanan ittiin jiraachisu qajeelchuufan kufee ka'aa ture.
Dabalataan hojii abbaa manaakoo itti fufsiisuuf, barreeffamoota isaas maxxansiisuuf ragaalee gargaaran hundan qindeessaa ture.
Galii ittiin jiraattan argachuuf maal hojjechaa jirtu?
Daldalatti seenuuf yaadaan jira. Akkamiin akka hojjetamu, maallaqa ittiin jalqabuufi akkamiin argachuu akka danda'u irratti ykn namoota waliin tahuun hojjechuuf...hanga ammaatti dhaabbilee garaagaraa waliin mari'achaan ture.
Paartiin koo hojii daldalaa irratti na ramadee hojjechaa waanan tureef dhuunfaakoof waanan hojjedhe hin qabu.
Uffata Getaachaw Asaffaan mogga'e
Ummataafan hojjedhe. Umatatti dabarseen... namoota naharkaa fuudhu jedhamanitti dabarseen harka qullaakoo bahe.
Irra caalaa kanan jiraachaa ture kaffaltii sooramaa Mallasiif kaffalamaa tureenidha. Maatii irraas asiis achiis .. jedheen jiraachaa ture.
Ammaan booda garuu hojii dhuunfaakoon hojjedha.
Miindaan sooramaa abbaa warraa keessanii hammami?
Ji'atti naannoo Birrii 14,000 natti fakkaata.
Mallas waliin bultoo dhaabdanii waggaa meeqa turtan?
Eeyyee ABUT [TPLF] cidha guyyaa eeyyame irraa eegalee waggoota 25/26'f hanga guyyaa du'a isaatti waliin turre. Ijoollee sadii waliin qabna. Isheen tokko gammoojjii keessattidha kan dhalatte.
Lamaan hafan ammoo Finfinneettin dahe. Waa'een isa tokkoo yeroo baay'ee namaaf hin galu. Kan isa dahu ana miti. Haadha qaba garuu kan hiriyyaa keenyaa du'aan boqatee Kinfee Gabremedindha kan guddisne.
Ijoolleen keessan hunduu isin waliin jiraatu?
Amma sagantaa du'a abbaa isaanii yaadachuuf nabira galanii turan. Tokko gara biyya alaa deemeera. Sadan isaanii garuu na waliin jiraatu. Egaa of danda'aa jiru. Eebbifamaniiru. Kan barumsa hin xumurres jiru.
Barreeffamoota abbaa warraa keessan akka walitti qabaa turtan nutti himtaniittu. Hangam baay'atani jennaan waggaa hammanaa isin jalaa fudhate?
Waggaa darbe beeksiseen ture. Kan ofi isaatii barreesse, inni barreessuun isaanii kan mirkanaa'e, kana dura maqaa paartiifi mootummaan bahaa kan turan dabalatee kitaabonni qixaa'an saddeet jiru.
Walumaa gala garuu gara 30 ni ta'u. Kunneenis, haala yeroo darbe turen maxxansuurra ol kaa'utu gaariidha jennee ol keenye. Rakkoon bajataas nu qunname ture.
Maallaqa qabnuufi kan arganne guutummaatti iddoo bashannanaa irratti waan baasneef nu hanqate. Inni waa'ee dimookiraasii barreesse dhihoo maxxanfama.
Waa'ee qonnaafi kaan dhaloota dhufuf fayyadu jenne yaadnes yeroo dhihootti ni maxxanfamu.
Keessumaa dandeetti inni mariiirratti qabu, dursee hubatuu isaa, akka inni wantoota xiinxaluufi kaan waggaa kana keessa maxxanfamu jedheen amana. Kanneen qixaa'an 8 yookiin 11 ni ta'u.
Kanaaf, kitaabonni saddeet qixaa'aniiru jechaadhaa?
Eeyyee. Dizaayinii xumuraa qofatu hafe. Lamaan garuu dizaayiniin isaanii waan xumuramef dhihootti maxxanfamu.
Vooliyuumii (jildiidhaan) waan eegalleef qolli isaa waan rakkisaa ta'ef hammi tokko alatti maxxanfama. Baay'een isaa immoo asumatti maxxanfame kanneen dubbisuu fedhan bira akka gahu goona.
Walumaa gala kitaaba meeqa qabu?
Walumaa gala, kan inni barreesse 30 olidha. Sanadootniinni qopheesse baay'eedha. Amma qorannoowwan isaa amma akka maxxanfaman kan hin feenes ni jiru.
Kan Afaan Ingiliziin qophaa'aniifi gurguddaa ta'anis jiru. Amma garuu kan maxxanfamuf qophaa'an 8 dha.
Kana sirreessuuf kan isin gargaaru eenyu?
Intalli koo guddoo na waliin hojjetti. Isheen faawundeeshinii abbaashee waliin hojjetti. Kaan kan faawundeeshinii jalatti hojjetaman ni jiru.
Bara 2012 keessa waan Itoophiyaa keessatti raawwatan
Sanadoota baay'ee ani waanan beekuf waggoota muraasa darban callisee adda baasaa kanin ture ana.
Kan inni harka isaatin barreesse nabira waan turanif natu qindeessaa ture.
Iddoo bashannanaa irrattis akka hojjetaa jirtan nutti himtaniittu. Maalirra gahe?
Iddoon bashannanaa kuni tulluu Gullaalleerratti argama. Baay'ee guddaadha. Bal'ina isaa amma sirriitti hin yaadadhu.
Garuu, mana kitaabaa, giddugala qorannoo, akkasumas kutaalee ciisichaa keessummoota qorannoof dhufanif dhihaate qaba. Galma walgahiifi bakkatti qilleensa fudhatan qaba.
Gara caalu biqiltoota biyya keessaan uwwifame. Karaa namni irra deemuus seenaa akka ibsuf hojjetaman. Yeroo du'a isaa waggaa 7ffaa yaadachuuf sagantaan taasifame suuraan isaa darbe darbe kaa'ame ture.
Ogeessota beekaniin dhalootaaf akka darbu itti yaadame kan hojjetamedha. Tokkon tokoon isaanii ergaa ofii qabu. Bareedinas qabu.
Dhihootti banama. Yoom akka ta'e garuu hin beekamu. Waan hundi erga qixaa'ee booda banuu barbaanne.
Hojiilee kanneen hojjachuuf deggarsa qarshii eessaa argattan?
Eega Mallas wareegame booda fawundeeshinii hundeessuuf biyyoota ollaarraa, naannoolee biyya keennaarra, mootummaan federaalaa fi kan biroos…maallaqni ummatarraa walitti qabamee ture.
Maallaqa san guutummaatti gara kanatti fidne. Maallaqni gara maatii dhufe tokkollee hin jiru. Nuti wanti kuni akka hambaatti akka hafu barbaanneeti. Kanaafuu, ijaarsi isaas kanaaan xumuramaa jira.
Eeyye! Deegarsa godhame saniin. Akkawuntii mataasaa qaba fawundeeshinichi. Fawundeeshinichi immoo baasii hundasaa cufa jechuudha. Kunis immoo waggaa waggaadhaan odiitii godhama.
Gaheen keessaan fawudeeshinii kana keessatti maal inni?
Azeeb: Akkuma sitti himetti… wanni guddaan barreeffamoota Mallas bittinaa'anii jiran qopheessu ture. Dhaabni ABUT ana koreesaanii keessa na baasuun isaan anaaf carraa guddaa ture.
Yeroo hin argadhu ture silaa. Itti yaaduus hin danda'u ture. Dursa kan kenneef; barreeffamoota ana bira jiran, kan yaaddadhuu fi bakka biraa jiran walitti qabuu ture.
Gamaaggamni fi tarkaanfiin dhaaba ABUT garam deema jira?
Waan kana qopheesse 'digitaalaayiz' godhuu fi namoota danda'aniif dabarsuu yeroo dhihoo kanatti xumure. Xiyyeeffannoon kiyya guddaan sanadoota Mallas qopheessuu; yeroo qopheessu immoo dubbisuuf carraa guddaa argadhe.
Hojiin kiyya guddaan isa ture. Darbee darbees wantoota hojjadhu biroos turan. Isa kana waan goolabeef gara hojii biraatti ce'uu qaba jedhee yaada.
Dhimmi giddugala dhukkubsatoota sammuu Gafarsaa hoo akkam ta'e?
Yeroo san ijaarsa isaa xumurree furtuu isaa kenninee jira. Ministirri Fayyaa hospitaala Amaanu'eel waliin akka bulchu ture kan goone.
Giddu galichi banamee akka hojjatuuf saayikaatiristoota hordooftoota amantaa kaatolikii ta'an 'biraazars' kan jedhaman akka tajaajilaniif biyya alaarra fidnee jirra. Waggoota afurii hanga shanii tajaajilanii jiru.
Yeroo ammaa kanatti Ministeera Fayyaa jala jira. Gahee kiyya kan ture giddu galicha ijaarsasaa xumuree; giddugalicha gurmeessuu fi Ministeerri Fayyaa akka hordofu godhuu ture.
Ammatti Ministeera Fayyaa jalatti tajaajila kennaa jira.
Kaayyoon keessan inni fulduraa maal?
Hojiin guddaan kiyya jedhee kan amanu bakka bashannanaa maqaa Mallasiitiin jiru xumuraa waan jiruuf ummataa banaa akka ta'u godhuudha. Kanaafi fi ijoollee kiyyarratti xiyyeeffachuu barbaada.
Hojiilee dhuunfaa fi jireenya dhuunfaa kiyya waan ittiin bulchuu jalqabuu barbaada. Gama kamin kan jedhuu fi akkamitti kan jedhuuf yeroo xumuru kan ifa taasisu ta'a.
Yeroo boqonnaa keessan akkamitti dabarsitu?
Biqiltuu naan jaalladha. Yeroo kiyya abaaboo fi biqiloota waliin dabarsuu filadha. Mana kiyya nan jaalladha. Mana kiyyaan ala bakka biraa deemuu hin fedhu.
Akka hojii baheen gara mana kiyyaati kan galu. Ispoortii, deemsa miilaa nan deema. Karaa dheeraa deema. Darbee darbee gaaras nan baha. Yeroo of qorachuu barbaadu nan baha.
Gaara kam baatanii beektu?
ee...Shiroo meedaa gara Inxooxxoo Maariyaam bahee beeka.
Abbaan warraa keessan sirboota Asteer Awwaqe akka jaalatan yeroo dubbatan dhagenyeerra. Isin hoo?
Dhiibbaa Mallas natti fakkaate Asteeriin baay'ee jaalladhaan. Albamiin ishee konkoolaataa kiyya keessaa bade hin beeku. Sirboota haarawa ishee nan dhaggeeffadha.
Yeroo baay'ee sirboonni ishee waan jireenya dhuunfaa kiyya waliin walitti dhihaatuuf irra deddeebi'ee dhaggeeffadha.
Sirboota Tigiriffaa biroos nan dhaggeeffadha.
Sirboota kam fa'atu jireenya keessan waliin deema? Mee tokkoo lama nutti himaa?
Mudannoo baay'eetu jiru... (Kolfa) fakkeenyaaf sirba yeroo tokko sirbite tokkotu jira.
Waa'ee namaa kan sirbite tokko. Yeroo sanitti dhaaba ABUT keessatti wal qoodamiinsi ture. Inni kun mudannoo an mudate waliin kan waliin deemu ture.
Qabsooftuu dirree waraanaa irratti abbaa ishee waliin wal waraante
Qabsooftuu duraanii yeroo ammaa Maqaleetti akaayii gurguraa jiraattu, ''Kanaafin qabsaa'e?''
20 Caamsa 2019
'Itiyoophiyaan wixinee Masiriin hidha Abbayyaa irratti dhiyeessite hin fudhanne'
Hidhattootni 17 Somaaliyaatti ajjeefaman
Maatiin manatti ijoollee adabuuf murtoo haaraa darbe